वचाल त्यो रुप
“शार्दूल, म बेलाबेलामा अतीतका ती फाँटमा त्यसैत्यसै डुल्न पुग्छु । हामीले टेकेका ती डोब टेक्दै हिड्छु अनि त्यहाँ त्यही तिमीलाई देख्छु । त्यही भएर आज पनि फोन गरेकी अर्थात तिमीलाई सम्झेर ।” मैले भने– शाम्भवी तिमी र ममा यही फरक अझै बाँकी छ । तिमी बेलाबेलामा सम्झन्छौ तर म कहिल्यै विर्सन्न । कहिल्यै नविर्सेपछि सायद सम्झीहरनु नै पर्दैन !”
शाम्भवीसँग मेरो एकप्रकारको सम्मानित सहवास थियो । आत्मियता, मित्रता र मित्रता पछिका अरु धेरै साइनोहरु थिए र यद्यपि केही छन् । जुन साइनोहरु टुटाउँछु भन्दा पनि नटुटने र जोडीराख्छु भन्दा पनि सधैं नजोडिने । तर उसँग मेरो केही छैन । न कुनै नाता, न कुनै सम्वन्ध, न कुनै आत्मियता, न कुनै मित्रता तर पनि मेरो मानसपटलमा बसेर उसले शाम्भवीको सम्झनालाई प्रतिस्थापित गर्दैछे । मेरो स्मरणमा उ कति शक्तिशाली बनेर आईरहेकी छे भने शाम्भवीलाई कहिल्यै नबिर्से जस्तो अब उसलाई म कहिल्यै नबिर्सने भएको छु ?
त्यो केटी ! कति खुशी छे आफैंमा ! नितान्त नौलो त्यो आयतीत पनमा ! सापटी लिएको सँस्कारमा ! तिर्नु नपर्ने गरि उधारोको रुपमा ग्रहण गरेको त्यो सभ्यतामा ! यी सबैलाई उसेले जीवनशैली बनाएकी छे । ठीकै पनि छ । जीवन अरुका लागि साँच्ने भए पनि आफू खुशी बाँच्ने हो । म र मेरो भन्ने उत्तर आधुनिक सँस्कारले आकार विस्तारित गरेर विश्वव्यापी नव चेतना ल्याएको बेला उ जस्ती केटी कसरी टाढा रहन सक्छे ? म यस्तै यस्तै सोचिहरन्छु र उसैलाई सम्झिरहन्छु ।
म कसैको जन्मदिनको एउटा सानो जमघटमा छु । अमेरिकामा “वर्थ डे” मनाइए पनि नेपाली सँस्कार र परिकार प्रसस्त छन् । भित्र अर्को कोठामा उ बोल्दै छे । मेरा आँखालाई उसले आफूतिर बारम्बार तानीरहेकी छे । केटाहरुको झुण्ड छ, उ उभिएकी छे । हरेक आँखाहरु उसलाई तलदेखि माथिसम्म निहाल्न वाध्य छन् । मेरा आँखा पनि ती अरु आँखाका वाध्यतासँग जोडिन वाध्य भए तर त्यो वाध्यताभित्र मेरा आँखा त्यो केटीको आभारुप सामू धेरैबेर टिक्न सकेनन् । मैले मुन्टो बटारे । आँखा चिम्लनु भन्दा मुन्टो बटार्नु ठीक ठाने । उसले पहिरेको पोशाकले के छोप्न खोजेको हो, के देखाउन खोजेको हो ? ठम्याउन सकेनन् । नसकेपछि आँखा चिम्लनु भन्दा बरु मन्टु बर्टानु ठीक ठाने । कान खुल्लै थिए आवाज सुनिरहेको थिएँ ।
मानिसको भीड बाक्लिदै छ । उ बोलिरहेकी छे, उसको बोलीले सबैको ध्यान तानेको छ । अनि ध्यानसँगै उसको पहिरनले अन्य आगन्तुकका आँखा झन् मजाले तानेको छ .। मानौ त्यहाँ त्यस्तो केही छ जुन नहेरी धर छैन । ठिटाठिटीहरुको हुल एक्कासी बाहिरियो । भान्साको टेबुलमा म रसपान सहित खानपान गर्दैछु । त्यो हुलमा प्रायः परिचित अनुहार छन् तर त्यो एउटा अनुहार एकदमै अपरिचित । सबैले अंकल भनेर अभिवादन गरे तर उसले “हाई बडी” भन्दै मसँग हात मिलाई । म एकछिन् अलमल्ल भएँ । अनि "हग" गर्न तम्सी । संकोच भयो । मैले नमस्ते भने ।
“ओ नमस्ते ! हाई” भनि उसले फेरि ।
हुलको एक ठिटोले अँग्रेजीमा भन्यो “उ प्रकाश अंकल हो ।”
उसले फेरि ”हाई प्रकाश, कस्तो छ तिमीलाई ?” भन्दै एकै स्वरमा भनि “तिमी ह्याण्डसम देखिन्छौ”। उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे, म केही बोलिन । मेरो असहजताको महशूस अर्को ठीटोले गर्यो जस्तो लाग्यो । स्पष्टिकरण दिदै भन्यो “अंकल, उ नेपाली बुझ्छे तर इङ्गलिस मात्र बोल्छे ।”
फेरि पनि म केही बोलिन । सहमतिको मुन्टो हल्लाएँ, फिस्स दाँत देखाएर तर भित्रभित्रै उप्रतिको आक्रोश बढिरहेको थियो । त्यो आक्रोस मेरो अनुहारमा सायद काताकता झल्कियो होला उसले निधार खुम्च्याउँदै कुम कक्क्र्याउँदै मधुर बोलीमा भनि “तिमी ठीक त छौ ?” “ओ, माई डियर ह्याण्डसम !”
“हजूर, ठीकै छु ।”
“तर प्रकाश, तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ । मलाई त्यस्तै लागिरहेछ ।”
“हैन, केही छैन त्यस्तो ।” उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे । म नेपालीमा जवाफ दिइरहेको छु । मभित्र यति बेलासम्ममा धेरै खुल्दुली, उत्सुकता र आक्रोसको युद्ध एकसाथ चलिसकेको छ । मेरो सहजताभित्र असहजातको कालो बादल छाइसकेको छ । मेरो मनको शान्त तलाउको तहमा आवेगको दह मिसिन थालेको छ । धैर्यताको बाँध फुट्न लागे जस्तो भइरहेछ ।
“ओ के प्रकाश, म फर्किहाँले” अँग्रेजीमै बोल्दै अर्को कोठातिर लागि । मलाइ अलिकति राहत अनुभूत भयो । लामो सास फेरेँ । कोठा भित्रबाट बाहिर उसको आवाज पहिले जस्तै चर्को र टड्कारो आइरहेछ । गानोमा मौरी झुम्मिए जस्तो गरि ठिटाहरु सबै त्यही गुडुल्किएर बसेका छन् । आफूलाई सहज र शान्त बनाउँदै म सोच्न थाले– “यो केटी हो को ? यो केटी पक्कै नेपाली होइन । किन भने नेपाली बोल्दिन । होइन, नेपाली नभए नेपाली कसरी बुझ्छे त ? होइन, यो केटी नेपाली नै हो । कता कता लाग्छ यो क्यारेवियन वा ब्राजिलियन पनि हुन सक्छे ! हैन, बंगाली जस्ती पनि छे ! कालीकाली हिस्सी परेकी निक्कै राम्री । व्यर्थै उसका बारेमा म टेन्सन लिइरहेको छु । भारतको पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीको सरसंगतमा रहेका धेरै बंगालीहरु नेपाली बुझ्छन् तर बोल्न सक्दैनन् । यस्तै पनि त हुन सक्छ । आखिर उसले बोल्ने भाषासँग मेरो के सरोकार ? उसको पहिरनसँग मेरो के दरकार ? उसको चालचलन र हाउभाउप्रति मेरो के अधिकार ? हाम्रो बानी यही खराब छ, हामी मान्छे देख्ने वित्तिकै एउट धारणा बनाउँछौ । बुझ्दै नबुझी, राम्रो पक्ष सोच्दै नसोची, हेर्दै नहेरी नराम्रो पक्षको मात्र विश्लेषण गर्छौ र नकारात्क धारणाभित्र बाँधिएर बस्छौं । म पनि त्यही हामी भित्रकै एउटा मान्छे हुँ । हामीकै एउटा अंश हुँ । म आफूलाई सकारात्क र सहज बनाउने प्रयत्न गर्छु ।
मैले केही क्षण अघि अर्कोतिर बटारेको मुन्टो अहिले फेरि उतिर फर्किन थालेको छ । रिसाएका आँखा लालयित हुन थालेका छन् । बारम्बार उसलाई हेरिरकेका छन् ।
“तिमी ह्याण्डसम देखिन्छौ । ओ, माई डियर ह्याण्डसम !” अनि “तर प्रकाश, तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ ।” उसले केहीबेर अघि भनेका शब्द दोहोरिदै, तेहेरिदै मेरा कानमा लगातार ठोक्किदै मनमा गुन्जिन थालेको छन् । उसको स्वरुप आँखाको बाटो भएर मेरो हृदयमा डेरा जमाउन थालिसकेको छ । नजानिदो चालाले मभित्र चाहनाहरु चुलिदैछन् । उत्सुकताहरु लहलह वयल खेल्दैछन् । त्यो केटी मेरो छेउमा आएर बसिदिए हुन्थ्यो, अब मसँग कुरा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो भन्नु भनेको प्रेमको सांकेतिक प्रस्ताव हो भन्ने सुनेको थिएँ । उमेरमा म, उ भन्दा निक्कै पाको देखिन्छु तर पनि यसले यस्तो कुरा यत्रो मान्छे सामु मलाई नै किन भनि ? प्रश्नहरुको भीडभित्र मेरो मन हराउन थाल्छ । ती धेरै केटाहरु उसैका दौंतरी देखिन्छन् तर पनि यी शब्द उसले मलाइ नै प्रयोग गरी, अखिर किन ?
म सोचिरहेको छु, निक्कै बेर भै सक्यो उ मेरा सामु आएकी छैन । कि अब त्यो आउँदिन ? त्यसले पनि मलाई कतै गवाँर र पाखे त सोचिन । निक्कै अघि बोस्टनको एउटा रेष्टुरेन्टमा काम गर्दा एक साना नेपाली भाइबाट गवाँर र पाखेको विशेषणले आभूषित हुनु परेको घटना सम्झिएँ । भरखर अमेरिका आएको मान्छे, एक अमेरिकी ग्राहकले बोलेको कुरा राम्रोसँग नबुझ्दा र फर्काउन नसक्दा उनले मलाई त्यो विशेषताको दोसल्ला ओढाउँदै भनेका थिए “अँग्रेजी नबुझ्ने यस्ता गवाँर–पाखे किन अमेरिका आउनु ?” मैले नसुने जस्तो गरेँ, केही बोलिन । अर्की एक नेपाली चेली थिइन, काठमाण्डुकी नेवारकी छोरी । मलाइ भनेको सुनेर उनले नमीठो अनुहार लाएको देखिरहेको थिएँ, फिसिकक फोस्रो हाँसो हाँसेर पचाएँ । मनमनै भने– “धन्यवाद भाइ । तिमीले मेरो कमजोरीको किलकिले समायौ ।” हो म उनीहरु जस्तो बोल्न र बुझ्न सक्दिनथे । प्रतिवाद गर्नु भन्दा नसुने जस्तो गर्न नै ठीक ठाने । अरु केही नेपालीहरु पनि थिए, सबैले दाइ भनेर सम्मान गर्थे, नजानेको सिकाउथे । दरवारिया खान्दानको हूँ भन्ने ती फुच्चे त्यहाँ काम गर्ने हामी नेपालीमा सबैभन्दा कान्छा र होचा थिए तर अरुलाई होच्याउनेमा सबैभन्दा अग्ला तिनै थिए । सबैले राजाराजा भन्थे, आफूलाई राजै ठान्थे । मनले नभने पनि मूखले बेलाबेलामा म पनि भनिदिन्थे । कानाको देशको आँखा चिम्लनु, लंगडाको देशमा खुट्टो खोच्याउनु भन्ने सम्झेर चुपचाप बस्थे ।
कतै यसले पनि मलाई यस्तै पो सोची कि ? मनको बाघले खान थाल्यो । उ हरेक शब्द अँग्रेजीमा बोलिरहेकी थिइ । म हरेक शब्द नेपालीमा भनिरहेको थिएँ तर उसले जे सोधी त्यसको जवाफ त दिएकै छु नि । हैन, यसले यस्तो सोचिन ! हैन, नसोचेको भए म छिट्टै आइहाले भनेर पल्लो कोठामा गएकी केटी उतै रमाएर किन बसी ? मनमा फेरि तर्क–वितर्कहरुको दोहोरिलत्ता चल्न थाल्यो । म बेलाबेलामा पुलुक्क–पुलुक्क हेर्छु उ उतै रमाइरहेकी छे । मलाइ भने छटपटीले हुट्हुटी पार्न थालिसकेको छ । उ आइन भने के गर्ने ? एक मनले सोचे उतै ठीटाहरुको हुलमा गएर मिसिउँ । अर्को मनले भने मैले यस्तो गर्न मिल्दैन यी सबै मभन्दा निक्कै आलाकाँचा छन्, मलाइ सुहाउँदैन । अनि त्यो केटी पनि ।
सोचेँ– म पनि मुर्खको भाँडो नै हुँ । उसले मेरो त्यस्तो प्रशंसा गर्दा मैले त्यही अनुरुपको शाब्दिक वा प्रतिकात्म अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सकिन । सायद त्यसैले उ मबाट एकैछिनमा अलग्गिएकी होली ! एक छिनमा नजिक भइ, एकै छिन्मा टाढा । यहीँका अमेरिकनहरु जस्तै ! हुन त मान्छेको मन र शिशा उस्तै हो भन्छन् सानो कुराले टुट्ने । के मैले यसालाई टुटाएँ त ? आखिर मलाई राम्रो नभन भन्ने मान्छे को छ, यो संसारमा ? मलाई राम्रो भन, तिम्रो मनले खराब ठाने पनि । म मान्छे हुँ भन्ने कुरा मैले किन विर्सेको ? सम्झनु पर्ने बेलामा किन सम्झिन नसकेको ? मैले पनि उसले जस्तै क्षणिक भावुकता मिसिएको भए पनि प्रणय मिश्रित प्रेममय बोली बोलिदिएको भए के विग्रन्थ्यो ? मेरै प्रश्नको ओइरोले म एकछिन पुरिन्छु । उसको कोमल हृदय मेरो कठोर व्यवहार र रुष्ठ अनुहारबाट सायद चुँडियो कि क्या हो ? मलाई फेरि मनको बाघले खेद्न थाल्छ । केही क्षण अघिसम्म आगो भएको मान्छे अहिले म पानी भएको छु । उ मेरो मनको तहमा तैरन थालेकी छे । भित्रभित्रै मभित्र केही हराए जस्तो भइरहेछ । मनले केही खोजे जस्तो गरिहेछ ।
केही बेर फेरि सोचेँ– हैन, अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो कुरा भन्नु सामान्य नै होला । भालुको मन खनिउ माथि जस्तो मात्रै हो मेरो मन । जे होस् उसले मलाई प्रशंसा गरेका कुरा भन्दा पनि यो केटी हो को र हो के ? चासोको विषय त त्यो हो नि । मभित्र खुल्दुलीको खाडल गहिरिदै छ । कसरी पुर्ने त्यो खाडल ? मैले मभित्रको मलाई अर्कोतिर मोडे । अब मैले आफूलाई मात्र एउटा इच्छामा बाँधे, त्यो केटीको बारेमा जान्ने तर कसरी ? उ मेरो छेउ पर्नै छोडी । एक्कैछिनलाई भनेर गएकी अहिलेसम्म आइन । ठिटाहरुकै हुलमा हराएकी छे, रमाएकी छे ।
फेरि सोचेँ अब के गर्ने त ? ल म जानु पर्यो भनेर अली ठूलो स्वार बोले । मुखले बोलेँ मात्र तर मनले हिड्न चाहेको थिइँन । मात्र उसलाई सुनाउन चाहन्थे र उसको प्रतिकृया बुझ्न चाहन्थे । सुन्ने बित्तिकै उ दौडेर आई । मेरो पाखुरा सामाउँदै कुर्सीमा बसाई र भनी– “एकछिन् बस न !” के खोज्जस् काना आँखा, जस्तो भयो मलाई । मन फुरंग, मस्तिष्क हलुंगो भयो ।
“मैले तिमीसँग कुरा गरिसकेकै छैन, कहाँ जान लागेको अहिल्यै ?” उसले सोधी, म मुस्कुक हाँसे मात्र ।
“ए तिम्रो नाउँ के रे ?” उसले फेरि मेरो नाउँ सोधी, मैले बताएँ । उ अहिले पनि अँग्रेजीमै बोलिरहेकी छे । म मेरो मातृभाषा नेपालीमै जवाफ दिइरहेको छु ।
“तिमी के काम गर्छौ ?”
“म सानोतिनो स्टोरमा काम गर्छु ।” मेरो जवाफ सुनेर हात फिजाउँदै घाँटी कक्र्याएर उसले भनि– किन सारा नेपाली स्टोर, ग्यास स्टेशन र ईण्डियन रेष्टुरेन्टमा मात्र काम गर्ने ? उसको बोली र हाउभावमा हेय भावको अमिलो गन्धको हरक मैले पाएँ । स्पष्टिकरण दिइन । फेरि पनि भलाद्मी हाँसो मुसुक्क हाँसे ।
उसको अँग्रेजी बोलाईको लवजले लाग्छ यो अमेरिकन होइन । यो यहाँ जन्मेकी पनि होइन । यो यहाँ धेरै सानो उमेरमा आएकी पनि होइन । नेपाली बुझ्ने तर नबोल्ने हो को यो ? मेरो मस्तिकमा यो प्रश्नको लट्टु फनफनी घुमीरहेको छ । उ मेरो एकदमै नजिक बसेकी छे । मान्छेको उपस्थिति पातलिदै छ । मभित्र कताकता असहजताको अनुभूति पनि भइरहेको छ । लोग्ने मान्छेको मन न हो, आगो सामुन्नेको मैन जस्तो ! पग्लिदै छ ।
उ अब अमेरिकाका बारेमा, नेपालीको अवस्थाका बारेमा महाभारत सुनाउन थाली । धेरै कुराहरु बताई अमेरिका बारेमा । मानौ म अमेरिका भरखर आएको छु । मैले केही जाने, बुझे र देखेको छैन । म सर्तकतासाथ मेरो भलाद्मी पनलाई बचाउँदै होमा हो, र ए, ए भन्दै टाउको मात्र हल्लाई रहेको छु । बेलाबेलामा मुसुक्कमुसुक्क हाँस्दै त्यो महाभारत एककोहोरो सुनेको छु । उसले नेपाल र नेपालीका बारेमा धेरै कुरा गरि तर ती धेरैमा धेरै नराम्रा मात्र गरि । यहाँबाट अब म फेरि उल्टो हुन थालेँ । पहिले सुरुमा उसले हात मिलाउँदाको अवस्थामा म विस्तारै फर्किन थाले । नकारात्कबाट सकारात्मक अनि सकारात्मकबाट नकारात्मक तिर फेरि घुम्न थालेँ । हावा हुण्डरी जस्तो कहिले पूर्वबाट बग्न थालेको छु, कहिले पश्चिमाबाट । छिन्छिनमा दिशा परिर्वनतन गर्दै छ मेरो मनले ।
अहिले ती ठिटाहरुको झुण्डलाई उसले त्यसरी नै छोडिदिइ जसरी केहीबेर अघि मलाइ छोडेकी थिई । मन भाँडिने र बाँडिने क्रम जारी छ । फेरि बाँडियो । एक मनले अब यो केटीको फन्दाबाट उम्किनु नै वेश हुन्छ भन्ने ठाने । हैन यसको बारेमा मैले जान्नै पर्छ । सोधेँ– “हामीबीच धेरै कुरा भयो तर मलाई तपाइँको नाउँ थाह भएन ।”
“कसरी थाह हुन्छ त ? तिमीले अहिलेसम्म सोधेका छैनौ ।” उसको बाचाल जवाफले मलाई एकछिन् नाजवाफ बनायो । म फेरि भलाद्मी हाँसो मात्र हाँसे, मुसुक्क ।
उसले आफ्नु नाउँ बताई । उसको नाउँ सुनेर फेरि म एकछिन अल्मलिएँ । यस्को नाउँ हामी नेपाली र अरु भारतीयहरुसँग मिल्ने खालको पनि छैन । म घोसेमुन्टो लाएर एककोहोरिएँ । म निक्कै होसियारी र सतर्कतासाथ उसालाई पढ्ने प्रयत्न अझै गर्दैछु । म फेरि पुरानै कुरामा फर्नक चाहेँ र सोधेँ– “स्यान्ड्रिया, तिम्रो मातृभूमि कुन हो ? अर्थात तिमी कुन देशबाट आएकी ?” मलाइ विश्वास थियो यो केटी अमेरिकामा जन्मेकी चैं हैन ।
अनुहार खुम्च्याउँदै बताइ– “नेपालबाट !” मानौ नेपालमा जन्मनु नै गल्ती भएको हो कि ? यस्तै बुझ्यो मरो मनले ।
मैले आफूलाई आफैभित्र काबुमा राख्दै फेरि सोधेँ– “के काम गर्नुहुन्छ ? आँखी भौं तन्काउँदै अनुहारमा गर्वको अनुभूति झल्काउँदै अलि ठूलो स्वरमा भनि– “अमेरिकनको बच्चा हेर्छु ।” मानौ अमेरिकनको बच्चा अप्सराले मात्र हेर्छन् । अरू नेपालीले हेर्दैनन् ।
“कति भयो आएको ?” “सात वर्ष ?”
विनम्रता साथ फेरि सोधेँ– “अहिले तपाइँ कति वर्षकी हुनु भयो ?” “चौविस ।”
यो सबै उसले अँग्रेजीमै बताइरहेकी छे । मभित्र अब फेरि आवेगको आगो दन्दनी बल्न थालिसेको छ । घृणाको भेल उर्लिन थालिसेको छ । तीन घण्टा अघि उसलाई भेट्दाको पुरानो अवस्थामा म फेरि पूर्णरुपले फर्कीसकेको छु । अब आफूलाई सम्हाल्न आफैलाई अति गाह्रो भइरहेछ । एकछिन फेरि चुपचाप बसेँ, आँखा चिम्लिएँ । भगवान सम्झिएँ ।
“प्रकाश, के भयो ?” आश्चार्यवोधक बोली बोली । “खासै केही हैन ।” मभित्रको असहजतालाई थिच्दै सहज जवाफ दिएँ । म फेरि केहीक्षण आफैभित्र हराएँ । के सोचेको भन्दै मेरो हत्केला तानी उसले । झसङ्ग जस्तो भएँ र फेरि मुसुक्क मुस्कुराउँदै भने केही हैन ।
“मलाई त म्याराथन मन पर्छ । तिमीलाई कुन खेल मन पर्छ ?” एकाएक उसले अनौठो प्रश्न सोधी । आकासको कुरा पाताल पुर्याए जस्तो लाग्यो मलाई । उसले किन एकाएक यो कुरा सोधी ? भित्रभित्रै म आफैलाई सोध्न थाले ।
“मेरो प्रश्नको जवाफ किन नदिएको ?” फेरि मलाई घचघच्याई । मैले भने– “बुझिन ? न अर्थ, न आसय केही बुझिन तर म्याराथन मन पर्नुको कारण के हो ? यो कुनै चाखलाग्दो उत्तेजनात्मक किसिमको खेल पनि होइन । आखिर कारण के हो ?” त्यतिबेलासम्म त्यहाँ उ र म मात्र छौ । प्राय सबै आ–आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेका छन् । पल्लो कोठामा केही मान्छे गफ गरिरहेका छन् आ–आफ्नै धुनमा ।
“म्याराथन धावक भनेका लामा दुरीका धावक हुन् । तिनमा स्टेमिना ज्यादा हुन्छ । लोग्नेमान्छेमा स्टेमिना हुन जरुरी छ । माइ डियर, सेक्स फिलोसफी पढ त्यसबाट थाह हुन्छ । म्याराथनका खेलाडी अलि पाका र छिप्पिएका हुन्छन् । मलाई यस्तै लोग्नेमान्छे मन पर्छ ।” यो सुनेर मैले उसलाई तलदेखि माथिसम्म एक पटक फेरि आरामले हेरेँ र फेरि घोसे मुन्टो लाएँ । म उसलाई पढ्न खोजीरहेको छु तर अब झन् अल्मलिएँ । उ मेरालागि झन क्लिष्ट, झन् गुढ र झन् रहस्य बन्दै गई । एउटा अवोधगम्य महाकाव्य जस्तो । उसँग आँखा जुधाउने प्रयत्न गरेँ, सकिन । मसँग कुरा गर्दा गर्दै उसले निक्कै वाइन पनि पिइसकेकी छे ।
“अनि तपाइँको खास नाउँ के हो ? बताउन मिल्छ ?”
“मिल्छ, माइ डियर ! तिमीलाई सबै कुरा बताउन मिल्छ । नेपालको मेरो नाउँ शारदादेवी हो तर मलाई यो नाउँ मन पर्दैन । त्यसैले मैले आफूलाई स्यान्ड्रिया बनाएँ ।”
फेरि सोधेँ– “अनि तपाइँले किन अँग्रेजीमात्र बोल्नु भएको ?”
“ओ प्लिज ! मलाई तपाइँ नभन । तिमी भन ।” मेरो हात समाउँदै भनि– “सरी, मैले नेपाली सबै विर्सिएँ !”
यो जवाफ सुनेर म एकाएक छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ । मभित्र भुतभुते खनिए जस्तो भयो तर उसको जवाफ सुनेर भित्रभित्रै हाँसेँ पनि। मनको हाँसो सादय मेरो अनुहारमा कताकता पोतियो होला ! उसले अनुमान लाउँदै भनि– “तिमीलाई मेरो कुरा मन पर्यो र त तिम्रो अनुहार हँसिलो भयो ?” म केही बोलिन ।
यसले सात वर्षमा आफ्नो मातृभाषा विर्सिई भने यसले आमाबाबु विर्सिई । दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नातागोता, इष्टमित्र, साथीसंगत, गाउँठाउँ सबै विर्सिई ! अर्काको देशमा शरणार्थी जस्तो बसेर आफ्नो मातृभूमिको खिल्ली उडाउने कुरा बाहेक सबै विर्सिई ! महिनौ कोखमा बास दिने र धरतीमा पहिलो पाइला टेक्न साहस दिने ती माता र मातृभूमिलाई सात वर्षमा विर्सनेले मलाई त सात मिनेटमा विर्सन्छे ।
सृष्टि विधाको अनुपम सृजनाको स्वरुप नारी, त्याग र तपस्याकी प्रतिरुप नारी, उत्सर्गको उपमा नारी, प्रेमको आधार र स्रोत नारीको श्रद्धा, सुधा, शक्ति, लज्जा, दया, मायाँ, छाँया, दातृ, भातृ र मातृरुप सम्झेँ । त्यही नारीको यो वाचाल रुप ?
म जुरुक्क उठेँ र भने– मिस शारदादेवी उर्फ स्यान्ड्रिया, तिमीले सोचे जस्तो म्याराथन धावक म नहुन सक्छु ..... ! वाक्य पुरा नगर्दै म हिडेँ । उ टुलुटुलु हेरिरहेकी थिई ।
त्यो वाचाल रुप । साँच्चै ममताका खानी मानिएका हाम्रा चेलीहरु वर्तमानमा एकाएक मिस स्यान्ड्रीया जस्तै भएका छन् । अमेरिका किन पुग्नु पर्यो र शिव जी  अस्ति मेरै गाउँमा यस्तै भएछ । अचेल हाम्रा गाउँ-ठाउँ शहरबजार जताततै यस्तै भईरहेको छ । यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको छ ।